သမ္မာကျမ်းစာသည်ကျွန်တော်တို့ ဘ၀အတွက် မည်သို့အရေးပါသနည်း | Calvary Burmese Church
မိတ်ဆွေရဲ့ဘ၀မှာ ချစ်ခြင်း၊ နာကျဉ်ခြင်း၊ အပြစ်ရှိခြင်း၊ အထီးကျန်ခြင်း၊ အောင်မြင်ခြင်း တို့နဲ့ပါတ်သက်ပြီး မေးခွန်းပေါင်းများစွာကို ရင်ဆိုင်ရပါသလား? ဤအရာများ အားလုံးနှင့်ပါတ်သက်ပြီး သမ္မာကျမ်းစာမှာ အဖြေရှိပါတယ်။
နှုတ်ကပတ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ခြေရှေ့မှာ မီးခွက်ဖြစ် ၍ အကျွန်ုပ်လမ်းခရီးကို လင်းစေပါ၏၊ (ဆာ ၁၁၉း၁၀၅)။
နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖွင့်ပြခြင်းသည် အလင်းကို ပေး၍ မလိမ္မာသောသူတို့ကို လိမ္မာစေတတ်ပါ၏ (ဆာ ၁၁၉း၁၃၀)။ အလင်းအားဖြင့် သွားရမည့်လမ်း၊ ဦးတည်ရာ ကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်စေပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျွန်တော်တို့ကို အလင်းပေးပြီး ဘုရားရှင်၏ အကြံစည်တော် တို့ကို မီးမောင်းထိုးကာ လမ်းမှန်ကို ထင်ရှားစေပါသည်။
တရားကိုမကျင့်ဘဲနာရုံမျှသာပြုသောသူမည် သည်ကား၊ မှန်၌မိမိပကတိမျက်နှာကို ကြည့်သောသူနှင့်တူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ကိုယ်ကိုကိုယ်ကြည့်ပြီးမှ၊ အခြားသို့သွား၍ မိမိအဆင်းသဏ္ဍန်ကိုချက်ခြင်း မေ့လျော့တတ်၏ (ယာ ၁း၂၃-၂၄)။
ဘုရားသခင်သည်သမ္မာကျမ်းစာအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်း အလုံးစုံ တို့ကို မိမိကိုယ်ကို မိမိ မှန်တွင်ကြည့် သကဲ့သို့ မြင်၊ သုံးသတ်၊ ပိုင်းခြားနိုင်စေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြင်ဘန်းသာမက အတွင်းစိတ်၊ မနော၊ ၀ိညာဉ် တို့ကို မှန်တွင် မိမိကိုယ်ကိုယ်ကြည့် မြင်သကဲ့သို့ မြင်စေနိုင်ပါသည်။
ကယ်တင်ခြင်း အလိုငှါ နှုတ်ကပတ် တရား၏နို့စစ်အားဖြင့် ကြီးပွားမည်အကြောင်း ဘွားစသောသူငယ်ကဲ့သို့၊ ထိုတရားနို့ကို အလွန်လိုချင်သောစိတ် ရှိကြလော့ (၁ပေ ၂း၂-၃)။
ကောင်း ကျိုး မကောင်းကျိုးကိုပိုင်းခြား၍ သိနိုင်သောဥာဏ်ပေးတတ်သော၊ အကြားအမြင် အတွေ့အစမ်းများသော သူတည်းဟူသော၊ စုံလင်သောအရွယ်ရှိသောသူတို့မူကား၊ ကြေခဲသောအစာအာဟာရကိုသုံးဆောင်ရကြ၏ (ဟေဗြဲ ၅း၁၄)။
သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေးအခေါ်၊ နှလုံးသား၊ အကျင့်စရိုက်၊ ချစ်ခြင်းတရား၊ ရိုးသားခြင်း နှင့် အစွမ်းသတ္တိ တို့ကို ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်စွာတိုးတက်ကြီးပွါးမှုရရှိရန် မှီဝဲရမည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ိညာဉ်အတွက် နေ့စဉ်အစာဖြစ်သည်။
ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်၏ အကွယ်အကာ၊ အကျွန်ုပ်၏ ဒိုင်းလွှားဖြစ်တော်မူ၏ (ဆာ ၁၁၉း၁၁၄ )။
သမ္မာကျမ်းစာသည် ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ သံသယဖြစ်ခြင်း၊ မှားယွင်းခြင်း၊ မလုံမခြုံဖြစ်ခြင်း၊ သိမ်ငယ်မှုကိုခံစားခြင်းနှင့် အလွန်အကျွံခံစားမှုနောက်သို့လိုက်ပါခြင်းစသော အရာများ အပြင် လောကီရေးရာ အခက်အခဲများတို့မှ အကာအကွယ်ပေး ပါသည်။
ငါ့ထံသို့ လာ၍ ငါ့စကားကိုကြားသည်အတိုင်း နားထောင်သောသူသည် အဘယ်သူနှင့်တူသနည်း ဟူမူကား၊ တိုက်ကို တည်သောအခါ နက်စွာတူး၍ ကျောက်ပေါ်မှာတိုက်မြစ်ချသောသူနှင့်တူ၏။ မြစ်ရေထသဖြင့် ရေစီး၍ ထိုတိုက်ကို ရိုက်ခတ်သောအခါ ကျောက်ပေါ်မှာတည်လျက်ရှိသောကြောင့် မလှုပ်နိုင်ရာ (လု ၆း၄၇- ၄၈)။
လောကမုန်တိုင်းတည်းဟူသော ဖျားနာခြင်း၊ ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်ခြင်း၊ ၀မ်းနည်းပူဆွေးခြင်း၊ ကွဲကွာခြင်း၊ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ဆုတ်ယုတ်ခြင်း အမျိုးမျိုး တို့ကို ကြံ့ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင် နိုင်ရန်အတွက် သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျွန်ုပ်တို့ အမြစ်တည်ရာ ကျောက်ဆောင်၊ အုတ်မြစ်ဖြစ်ပါသည်။
သမ္မာကျမ်းစာသည် တိုင်ပင်ဖော်၊ ပဲ့ပြင်သူဖြစ်သည်
အကျွန်ုပ်ကို ဥာဏ်ပေး၍ ပဲ့ပြင်တော်မူမည်…… (ဆာ ၇၃း၂၄)။
အခက်အခဲနှင့် ဒုက္ခတွေ့ကြုံချိန်တွင် ဥာဏ်ပညာ အမြော်အမြင်ရှိသော မိတ်ဆွေတစ်ဦးထံမှ အကြံဥာဏ်ကောင်း ရရှိခြင်းသည် အလွန်တန်ဖိုးရှိသကဲ့သို့၊ ကြုံတွေ့နေရသော လောကပြဿနာ များအတွက် သမ္မာကျမ်းစာသည် အကောင်းဆုံးတိုင်ပင်ဖော်တိုင်ပင်ဖက်ဖြစ်သည်။
မိတ်ဆွေ သမ္မာကျမ်းစာကို ဖတ်ရှု၊ ဆင်ခြင်ပြီး ယုံကြည်စွာ လက်တွေ့ အသုံးချခြင်းဖြင့် သင့်အသက်တာကို အံ့သြဘွယ်ကောင်းစွာ ပြောင်းလည်းပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်၏ သမ္မာကျမ်းစာအားဖြင့် ဘ၀အသက်တာတွင် အေးချမ်းသာယာမှု ကိုရရှိပြီး အောင်မြင်သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ ဟု ဆန္ဒပြုရင်း
မှတ်ချက်။ http://70030.netministry.com/articles_view.asp?articleid=31645&columnid=3801 မှ What Difference can the Bible Make in My Life? ကို ကိုးကားတင်ပြထားပါသည်။
One comment on “သမ္မာကျမ်းစာသည်ကျွန်တော်တို့ ဘ၀အတွက် မည်သို့အရေးပါသနည်း”
This entry was posted on March 23, 2011 by thawngno in Articles Bible Study, Articles Christian Life, Christianity Related Articles, Thawngno and tagged Bible, Thawngno.